Ungayixazulula kanjani inkinga yokuhlola ukuphepha okufile i-angle efile?
Ngokwesisekelo sokwamukelwa okusabalele kwamakhamera wokubhekisisa kanye nokufakwa kwemishini yokuqapha ezokuphepha, kungani kunezigameko ezivame ukweba empini.
Ngokwesisekelo sokusetshenziswa okubanzi kwamakhamera wokuhlola kanye nokufakwa kwemishini yokuqapha ezokuphepha, kungani kunezigameko ezivame ukweba empilweni. Kwaziwa ukuthi kungenxa yokuthi ukuqapha kwaba ne-angle efile ngemuva kophenyo. Isela ngamabomu likugweme ngamabomu indawo yokubheka futhi yangena endaweni yokubhekisisa yokweba ukweba. KodwaIkhamera ye-CCTV akazange aqaphele ukweba. Ngakho-ke lapho abantu bebhekana nezindawo ezahlukahlukene eziyinkimbinkimbi futhi idivaysi yokuqapha ine-angle efile, ingabe ikhona indlela yokugwema ubungozi?
Uhlobo lweKhamera Yezokuphepha Ejwayelekile kufaka phakathi ikhamera ye-IP yenethiwekhi futhiIkhamera ye-PTZ IP. Ukuphela emuva kuvame ukufakwa ngeHd nvr Njengedivayisi yokuphathwa kokugcina ividiyo, neIkhamera ye-Analog HD ineI-DVR kulungiselelwe ekugcineni kwayo.
Ikhamera yezokuphepha imvamisa ifakwe ilensi ehleliwe, i-lens ye-varifocal, futhiIkhamera ye-Moom Lens ye-IP ye-Moon Lens. Njengamanje, imakethe ihlukaniswe ngamakhamera wezinhlamvu, amakhamera we-dome namakhamera we-360-degree patoramic asheshe. Phakathi kwazo, ikhamera ye-bullet ivame kakhulu, ilungele ukubhekwa kwevidiyo yangaphakathi nangaphandle; Ikhamera ye-Dome ngokuvamile isetshenziswa ngaphakathi futhi ivolumu incane; Ikhamera yezokuphepha ye-360 degree yezokuphepha ye-dome ivame ukulungele izindawo ezinkulu zangaphandle, njengemigwaqo, izigcawu neziteshi. Ukufakwa kodonga noma ukuphapha kophahla kuyatholakala ngokuya ngemvelo yokufaka noma izidingo zokuqapha.
Indlela yokufaka ikhamera yokubhekisisa:
1. Endabeni yokuphazanyiswa kwe-electromagnetic eqinile, ukufakwa kwekhamera yokubheka kufanele kufakwe kufakwe phansi emhlabathini.
QAPHELA Isimo sokuhlangabezana nezidingo zomkhakha wokuqapha okuqondiwe, ukucatshangelwa kokuqala yindawo yokufaka, ukuze inike amandla ikhamera ukugwema ukuphazamiseka kwemvelo ezungezile, ukufeza ukuthwebula kwevidiyo nokusinda okungcono. Lapho sifaka ngaphakathi endlini, kufanele siqinisekise ukuthi ukuphakama kwemishini akuwona ngaphansi kwamamitha ayi-2,5, nasendaweni yangaphandle, kufanele futhi sibeke imishini yokuqapha endaweni engaphezulu kwamamitha ayi-3 ukusuka emhlabathini. Qinisekisa ukuthi ikhamera ilimele kabi.
3. Ngokuphathelene nokufakwa kweIkhamera Yezokuphepha ElevatorA, into yokuqala okufanele icatshangelwe yinkinga yokuphazamiseka, ilandelwa yinkinga ye-wiring, kanye nesidingo sesithathu sokubheka ukunikezwa kwamandla. Kusuka kokuhlangenwe nakho kwethu kwansuku zonke, ikhamera kwimoto ye-Elevator ngokuvamile kufanele ifakwe nge-diagonally ngakwesokudla phezulu kwesokunxele noma phezulu komnyango wemoto ye-lifti. I-lens ivame ukulungiswa lens 2.8mm, futhi ingabheka ngempumelelo izici zobuso zabahlali emotweni yelifti.
I-4, ikhamera yokubhekwa namadivayisi wayo asekelayo, njengelensi, izihlangu zekhamera, amabakaki, ukufakwa kufanele kube ukuqina, ukufakwa kufanele kubhekwe, ukufakwa kwekhamera kufanele kuhambisane nakho indawo ezungezile.
5. Intambo yesiginali yekhamera nekhebula lamandla kufanele kwethulwe ngokuhlukile. Ingxenye eveziwe yekhebula ivikelwe yi-hose futhi ayithinti ukujikeleza kwekhanda le-tripod.
PHAMBI Siyikhetha kanjani ikhamera yezokuphepha efanele?
Indlela Yenethiwekhi IP Ikhamera Indlela Yokuxazulula Ukuxazulula Izinkinga OLANDELAYO